PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-09-03 - Umzali ubaluleke kabi jabula ngoba usenabo
Umzali ubaluleke kabi jabula ngoba usenabo
Isolezwe ngeSonto - 2017-09-03 - IMIBONO/EZINOHLONZE -
MHLELI: Ngithi angidlulise ukungathokozi kwami ngendlela yokubona umuntu omdala aphathwa ngayo la emnyango futhi azophathwa kabi nayingane yakhe impela ayizele, esibesegiyeni lokuthi impela umzali wayo akaselutho la eduze kwayo futhi akalutho ngendlela yokubona nokuba seduze kwayo kungekuhle nhlobo.
Muntu omusha waseNingizimu Afrika, usunemali, uNkulunkulu usekusize ngendlela yokuthi impela usuwakhe ezindaweni eziphezulu kabi, noma usucabanga ukwakha kuzo, ngicela uqonde ukuthi ulapha emhlabeni nje kungenxa yoMdali esebenzisa umzali wakho ukukuletha la emhlabeni.
Yebo bakusize wafunda kahle kakhulu kodwa kulo okulibalayo lokho ngithi kuwe umzali wakho ubaluleke kakhulu kabi eduze kwakho.
Unenhlanhla basaphila bobabili kujabulele lokho uqonde ukuthi uNkulunkulu usakunike ithuba lokuba ukwazi nokubajabulisa bobabili ndawonye.
Unemali ngendlela yokuthi ngezinsuku zoFathers’ Day noMothers’ Day ungabayisa emahhotela ubajabulise, ubamangaze ubagibelise ibhanoyi baye koGoli noma eKapa bayojabula lezo zinsukwana uNkulunkulu athi bajabulise ngazo.
Umuntu umusha kwenze ukuze impela uthi uhlakaniphile ugwinya amathe nomqondo uzinza uzibone uhlakaniphile.
Kuyiqiniso yini ukuthi umzali wakho uyakwazi ukushayela imoto, futhi mhlawumbe bobabili bayakwazi kodwa wena unemoto awubaniki ithuba? Banezingane ezimbili noma ezine zisebenza kahle ngendlela yokuthi sezihamba ngoMercedes, noBMW kodwa abazali bagugile basangakwazi ukushayela kodwa baya emadolobheni kanzima babuye kanzima beyongena emakhaya abo kamzima, yinto enhle leyo? Noma kuyinkinga ukuya edolobheni komzali ngenxa yemali kodwa izingane zabo lutho ukubathengela imoto nje, bazikhulise ngendlela yokuthi zinemali ngempela, futhi kukude nazo ukupha abazali bazo imali yokuthi bajabule nje kuphela, kuhle yini lokho?
Kulungile-ke yinto ekude nawe leyo, uyilo muntu ongaqondi ukuthi ulapha emhlabeni nje yilo mzali wakho osaphila, uphuma la emnyango kungakugqameli ukuthi yikuphi kuphela uNkulunkulu akunike izimpiko nawe uzibona undiza la emnyango kaNkulunkulu kodwa awunazimpiko.
Ungumzali wakho, uNkulunkulu usakusizile uyaphila waphinde wakusiza uNkulunkulu ukunikile umsebenzi omuhle nokwazi ukuvula amabhizinisi amahle akunika imali, qinisekisa ukuthi uyamjabulisa umzali wakho, uyamupha nemali yokuthi ajabule futhi aphile ngendlela yokukubona ukuthi impela ungumntwana wakhe futhi impela unomntwana amthola yena.
Ngoba konke okwenza la kokaNkulunkulu umhlaba kuqonde konke kukulindile ngale kwethuna, konke lokho okukukhohlisayo kukufake emagiyeni kaSathane kuyobe kungasekho futhi kungenamandla usubhekene nakho konke obukwenza la kokaNkulunkulu umhlaba.
Nkosinathi Richard Ziqubu KWADUKUZA